'Aanaa Jaawwiitti 'ajjeechaan jumlaa' raawwateera' jedhu angawoonni Beenishaangul - BBC News Afaan Oromoo
'Aanaa Jaawwiitti 'ajjeechaan jumlaa' raawwateera' jedhu angawoonni Beenishaangul
Aanga'aan Naannoo Beneshaangul Gumuz daa'immaniifi dubartoota dabalatee Naannoo Amaaraa Aanaa Jaawwiitti 'ajjechaan jumlaa' raawwatamuu dubbatan.
Dubbi Himaan naannichaa Galataa Hayiluu BBC'tti akka himanitti, Naannoo Amaaraa Aanaa Jaawwiitti gareen ofiin of-gurmeessan jedhaman daa'immaniifi dubartoota dabalatee dhalattoota naannoo Beenishaangulirratti ajjeechaa raawwataniiru.
Keessattuu gandoota lama kan dhalattoonni naannoo Beenishaangul keessatti jiraatanitti ajjeechaan kun raawwachuu dubbatu.
Ajjeechaan raawwatame kunis kan yeroo darbe naannicha keessatti Matakkalitti dhalattoota Amaaraarra ga'een wal qabatee haaloo bahuudhaaf raawwatame jedhan.
'Waldhabdee Benishaangulitti uumameen namootni 17 ol ajjeefaman'
Obbo Galataan meeshaan waraanaa seeraan alaa daddabarfamu rakkoo nageenyaa boora'e kanaaf sababa guddaadha jedhan.
Nageenyi bakki rakkoon kun itti uumame hedduu sodaachisaa waan ta'eef reeffa namoota ajjeefamanii hangam akka ta'e baruufis rakkisaadha jedhu.
Akka Obbo Galataan jedhanitti gandoonni lamaan kunneen guutummaan guutuutti kan barbaada'an yommuu ta'u, namoonni madaa'an 80 Hospitaala Pawweetti wallaanamaa jiru.
Kanneen biroos magaalaa Gilgal Balas jedhamtutti baqatanii akka jiran odeeffanneerra jedhan.
Jiraattonni Aanichaa yaada miidiyaa naannoo Amaaraaf kennaniin ''Manni isaanii hedduun gubateera. Sodaa guddaa waan qabaniif gara bosonaa baqataniiru,'' jedhaniiru.
Yeroo ammaa kanattis Raayyaan Ittisaafi Poolisiin Federaalaa seenee tasgabbeesseera jedhan, Obbo Galataan.
Gama biraatiin, Itti-aanaa Ministirri Muummee Obbo Dammaqaa Mokonnin gochi haaloo bahuu Beneshaangul Gumuz Jaawwiitti qaqqabe balleessaa tokko balleessaa biraatiin deebii kennuuf yaaluu gaddisiisaafi godaannisadha jedhan.
Qaamni miidhaan irra ga'e isaa miidhaa irraan geessise sana dura dhaabbachuufi gaafachuu dhiisee, sanyii lakkaa'ee bakka biraatti lubbuufi biddeen lammilee jireenya mo'achuudhaaf dhama'atan balleessuun hedduu kan nama gaddisiisuufi hunda keenya kan yaaddoorra buusedha jechuun TV Amaaraatti dubbataniiru Obbo Dammaqaan.
Dhimma kana yeroo dhiyoo keessatti ol-aantummaa seeraa kabachiisuudhaaf, qaamoleen seera kabachiisan jabaatanii gahee isaanii akka bahan, naannoo hundatti dafee qaqqabaa kan ta'e ga'umsa mootummaa kan ibsuufi mirkaneessu ramaddiifi sochii taasisuun dirqama ni barbaachisa jedhan.
Kaleessa naannoo Amaaraa magaalota Baahirdaar, Gondar, Dabiremaarqos, Marihaawwiifi magaalota biroo keessatti hiriirri nagaa gaggeeffamee ture.
Hiriira Baahirdaaritti ture kan qindeessaa ture Obbo Indaalammaawu Kindee akka jedhetti ammoo Matakallitti daa'ima waggaa lamaa osoo hin hafiin xiyyaan sabni Amaaraa warra Gumuzootaan ajjeefamaa jiru.
Warri hiriira bahan kunneen walitti bu'insa naannoo Beneshaangul Gumuz Matakkal, Axaayyeefi Gondar keessatti uumamaniin ajjeechaa dhalattoota Amaaraa irratti raawwatame mormuudhaan sagalee isaanii kan dhageessifatan yommuu ta'u, mootummaan naannoo hariiroo saboota qofaa irratti xiyyeeffachuun furmaata atattamaa hin kennine jechuudhaan balaaleffataniiru.
Hiriira kana gaggeessuudhaaf hayyama mootummaa naannichaa kan hin arganne ta'aniyyuu, murtee ofii isaanittiin kaka'uudhaan dargaggoonni itti-gaafatamummaa fudhatanii akka gaggeessan Indaalammaawu dabalee ibseera.
Anga'aan Aanaa Jaawwii miidiyaa naannoo Amaaraaf yaada kennaniin ''Aanaa keenyatti qaamni hidhate kan waraana namootarratti labsu hinjiru,'' jedhaniiru.
Waldhabdee Benishaangulitti saba Amaaraa fi Gumuz gidduutti uumameen namootni 17 ajjeefaman
Benishaangul Gumuzitti barattoonni barnoota hunda Afaan Oromoon barachuufi
27 Fuulbana 2018
Dhiiroonni maaliif dubartoota caalaa of ajjeesuu?